Epos ikhadi ezikhanyisayo credit | ezifana senzalo ikhomishana ukubala, imininingwane service
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Epos ikhadi ezikhanyisayo credit | ezifana senzalo ikhomishana ukubala, imininingwane service
Isikweletu esingu yelangabi ephenduphendukayo Epos ikhadi, amasevisi ezimbili "ngisho noshintsho ribonucleic, lapho ribonucleic" bungeke bube khona. "Shintsha Ribonucleic" okungukuthi, ngisho noma ucacise isamba semali noma izitolimende ngesikhathi yezitolo, iyisevisi, ezifana kungaguqulwa ku-credit ezijikelezayo kusuka ngemuva by inqubo. IKhomishana udumo ezikhanyisayo kuzothatha isikhathi esingakanani, kodwa ngoba lokho kungaba njalo ukubuyiswa kwemali imali nyangazonke, ungehlisa umthwalo senkokhelo nyangazonke.
"kunini ribonucleic" iyisevisi ukuthi njalo iba zokukhokha ku-credit ezijikelezayo. Ngoba ngokuzenzakalelayo hlela njengeringithoni credit ezikhanyisayo ngesikhathi Ukusetshenziswa kwekhadi, awudingi ukwenza inqubo ngokuthi "ushintsho ribonucleic". Nokho, ngisho noma ucacise isamba semali noma izitolimende, ngenyanga ezayo kwezimangalo ukuze zibe credit ezikhanyisayo, ake sinake lelo phuzu.
Ukusebenzisa lezi zinsiza, ocingweni kusayithi ewebhu kanye ikhasimende maphakathi Epos ikhadi, uzodinga basabalalise inqubo.
Epos ikhadi ongashintsha lemali ukubuyiswa kwemali imali, uma usebenzisa isevisi ngokuthi "ribonucleic Yiqiniso yokukhokha ushintsho", ungakwazi ukushintsha buyiselo uhlelo lwenyanga. Futhi "Yiqiniso ejwayelekile futhi Yiqiniso eside, inkambo yomugqa oqondile" zezinhlobo ezintathu buyiselo uhlelo ibhalwe, ngokuhamba ejwayelekile futhi eside Yiqiniso, inani buyiselo izonqunywa ibhalansi. Ngokuhamba yomugqa oqondile, ke izonqunywa nyangazonke ukubuyiswa kwemali imali kungakhathaliseki ibhalansi (5, 000 yen).
Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukwandisa inani ukubuyiswa kwemali imali, futhi nawe ungakwazi ukukhokha imali esele ku-batch egcwele. Uma kungenzeka ukuba ukubuyiswa kwemali ekuseni, lokho kuyoholela ukonga lowo myalo lemali senzalo.
inkomba | buyiselo ngobuningi, yinhlama-sum nokukhokhwa ezikhanyisayo credit kungenzeka? Lapho
Epos amaphuzu ekhadini
Epos, okuyinto zanqwabelana amadili ukusebenzisa credit ezikhanyisayo, kuzosiza uthole Epos iphuzu. Endabeni inkokhelo, okuzoba 1 iphuzu ngamunye athole 200 yen, ukusetshenziswa ezikhanyisayo Ikhredithi izikhathi 2 noma amaphuzu ngaphezulu uthola. Kufanele kuqashelwe, Epos amaphuzu zanqwabelana ingasetshenziswa lapho sithenga at the Marui, ungakwazi ukushintsha ezihlukahlukene izitifiketi isipho.
Uma Epos usebenzisa ezikhanyisayo credit card lenzalo ikhomishana
Epos ikhadi, kumele akhokhe imali isithakazelo ukuthi uzimisele. Real inani lenzalo yonyaka kuyinto "amaphesenti angu-15", lokhu isilinganiso value kwamanani uma iqhathaniswa nezinye ikhadi.
senzalo Imali, kuyafana izinkampani jikelele umthengi ezezimali kanye credit card, iye ebalwe "ukusetshenziswa nemali × real inani lenzalo yonyaka." Ngokwesibonelo, usebenzisa 100,000 yen ezikhanyisayo credit, esimweni buyiselo e imali izinyanga eziyisithupha, eduze kwe- "100,000 × 0.15 ÷ 6 = 2,500 yen ', kuzothatha senzalo Imali 2,500 yen isiyonke.
inkomba | interest jikelele (ikhomishini) wesikweletu ezikhanyisayo, zenzalo Kuthatha 500 yen senzalo nezimali.
inkomba | interest jikelele (ikhomishini) wesikweletu ezikhanyisayo, zenzalo